Farxada iyo Ilmaynta ay leedahay Maalinta ilmahaagu bilaabayo Faslaka Xanaanada Caruurta(Kindergarten) ayaan ugu talo galnay in waalidiintu iskugu yimaadaan wada shaahaysi.
Ma ogtahay wixii aad samayn lahayd kadib marka aad ilmahaaga baska saartid si uu u bilaabo fasalkiisa cusub ee Kindergartenka? Ma u baahan tahay inaad lakulantid waalidiin sidaadoo kale farxad, cabsi, iyo wal-wal ka qaba caruurtooda maalintaa oo ay ugu horayso schoolka ka hor inta aadan shaqo tagin? Mase doonaysaa, in aad la kulantid waalidiinta ay ilamahoodu fasalka la dhigtaan ilmahaaga si aad u kala warbixin qaadataan una kala badalataan taleefonada iyo emailada. Fadlan, nagala soo qayb gal kulankan oo ka dhici doona DevJam Studios si aan uwada qaxwayno marka aad ilmahaaga iskuulka gaysid kadib.
Marka ama xiliga kulanku waa: Arbacada 26ka August Saacadu marka ay tahay Todobada iyo Barka Subaxnimo ilaa iyo Sideeda iyo Barka Subaxnimo (7:30am-8:30am) (hadaad daqiiqado yar haysatid iyo hadii aad saacado joogi kartidba, Samee sida aad adigu jeceshahay). Meeshu ama Cinwaanka kulanka lagu qabanayo waa: 2818 West 46th Street.
*Waxaa meeshan nagu soo dhawayey oo gogoshan noo dhigay Waalid ka mid ah waalidiinta Barton oo magacyadooda lakal yiraahdo Andie Thomas iyo David Hussman.
Intaa waxaa noo sii dheer in aan caruurta isu keensano inta lagu jiro Summerka!
Taariiqda ama waqtiyada Isu imaatinka ama kulanka caruurta Kindergartenka oo loogu talogalay in ay isla ciyaaraan isna sii bartaan!!!
Inta uu iskuulku xiran yahay, Waalidiinta Barton ayaa qabanqaabin doona in ay caruurta cusubi ee kindergartenka galaysa iyo waalindiitooduba isi sii bartaan caruurtuna isula ciyaaraan. Si aan jadwal wanaagsan oo cid walbaa ka faa’idaysna karto u samayno, waxaanu samayn doonaa jadwalka maalmaha Isniinta ilaa iyo Jimcaha iyo mid Sabtida iyo Axada ah. Maalmaha Talaadada ah Subaxdii, laga bilaabo 10:30 - 12:30, Waxaanu ku kulmi doonaa Parkga la yiraahdo Lyndale Farmstead Park, oo cinwaankiisu yahay (3900 Bryant Ave. S
Minneapolis, MN 55409) Laga bilaabo Talaadada, Bisah lixaad sagaalkeeda(June, 9th). Waxaan kaloo samayn doonaa sedex kulan oo caruurtoo dhami ka soo qayb gali karaan bishiiba mar sedexda bilood oo uu iskuulku xiran yahay. Kulanka Sabtiyadu waxay u dhacayaan sidan hoos ku xusan.
Sabtida koowaad waa, bisha lixaad lixdeeda, Sabtida labaad waa Bisha todobaad kow iyo tobankeeda, Sabtida sedexaadna waa bisah sideedaad shan iyo tobankeeda(June 6th, July 11th and August 15th) Sidoo kale waxaa lagu kulmayaa Lyndale Farmstead Park (3900 Bryant Ave. S. Minneapolis, MN 55409) Saacadu marka ay tahay Tobanka subanimo ilaa iyo Kowda duhurnimo (10:00 - 1:00) Waxaan rajaynaynaa in aan halkaa idunku aragno!